Ileta yokuBhena yeAmazon, iAkhawunti yoMthengisi ixhonyiwe, isiCwangciso sokuSebenza
Umcebisi wakho weZibheno kwiAmazon
Uyibhala njani ileta ephumeleleyo yeSibheno kwiAmazon kunye nesiCwangciso sokuSebenza?
Qalisa nje incoko ebukhoma nathi ngoku okanye ugcwalise ifom yokubuza kwi-intanethi engezantsi ngeenkcukacha zakho kwaye umcebisi wethu uya kubuya kwiyure. Nxibelelana nathi ngeleta efanelekileyo yokuBhena yokuBekwa kweAmazon.
Qonda ukuba kutheni iAkhawunti yoMthengisi yeAmazon iye yanqunyanyiswa!
Ukwazi unobangela wokumiswa kweakhawunti linyathelo lokuqala lokufumana iakhawunti kwakhona. Ukufumanisa ingxaki kufuna ulwazi lobuchule kwicandelo. Iingcali zethu zeakhawunti yoMthengisi ziya kukunceda ufumane oyena nobangela wokunqunyanyiswa kwakho kwaye ucacise ukuba singakunceda njani ukuba ubhale ngokugqibeleleyo Ileta yokubhena yeAmazon. Nxibelelana nathi ngoku kwaye ufumane iSibheno sakho se-ASAP.
Sivule iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki.
Bhuka uQhagamshelwano lwaSimahla
Abacebisi baya kubuya ngeYure e-1
Ndingakuthintela njani oku kunqunyanyiswa kungenzeki kwixesha elizayo?
Kuya kufuneka ucinge nzulu ngayo malunga nendlela onokuyinqanda ngayo ukuba ingenzeki kwakhona kwixa elizayo. IAmazon iyakulindela ukuba kuya kufuneka wenze naziphi na izicwangciso zomsebenzi kwaye ngamanye amaxesha ziya kubuyisela iAkhawunti yakho yoMthengisi yeAmazon wakube ubonakalisile ukuba uwenzile umsebenzi wakho.
Ukuba ufuna uncedo lokukhangela iakhawunti yakho yomthengisi yeAmazon, okanye kwelinye icala ukuba ungathanda ukubona ukuba zeziphi iingxaki zokubuyiselwa kwakho, sinokukunceda. Thetha nomnye wabameli bethu ukumamela thethwano olukhululekileyo kunye noluvo lweengcali malunga netyala lakho.
Sinokukunceda ekubheneni ukuba uluhlu lwakho luyasebenza kwaye kwimeko yokophula imigaqo-nkqubo enokuthi ichaphazele impilo yeakhawunti yakho! Thetha nomnye wabameli bethu bokunakekelwa kwabathengi ukuze ufumane ukubonisana simahla.
Fumana iAkhawunti yakho yeAmazon emisiweyo ibuyiselwe ngaphakathi kweeyure ezingama-24
Ngelixa kuthatha umzuzwana ukuba iakhawunti yakho yomthengisi ye-amazon imiswe, ukufumana iakhawunti ibuyiselwe kunokuba yinkqubo echitha ixesha. Ngamanye amaxesha, eli xesha liyandiswa ngenxa yeempazamo ezithile apha naphaya ezenziwe ngumthengisi ngenxa yezizathu ezahlukeneyo ezinjengokungacacisi kwimigaqo-nkqubo yeAmazon, ukungakwazi ukubona umba ngasemva Ukumiswa kweakhawunti yeAmazon, okanye ukungabinakho ukubhala ngokucacileyo ukusika kunye neleta yobuchule yokumiswa kweAmazon. Siziqonda ngcono ezi ngxaki kunaye nabani na yiyo loo nto siqinisekisa ngenkonzo esemgangathweni ngexesha elikhawulezayo.
I-Aplus Global eCommerce Isisombululo sokumisa sisisombululo esipheleleyo seemfuno zakho zeSibheno nangaphezulu. Ixesha linokubakho ukusuka kwiiyure ezingama-24 ukuya kwezingama-72 ngokuxhomekeke kubunzima bengxaki.
Ndingayisebenzisi njani iakhawunti yam yeAmazon?
Ukuqesha umntu kufanelekile kodwa unganikela ingqalelo kwisaziso esithunyelwe yiAmazon, uze necebo lokusebenza. Ezi zezona zithako ziphambili zesibheno esifanelekileyo.
Kuthatha ixesha elingakanani ukubhala incwadi yokumiswa?
Ixesha elifutshane elithathayo ukubhala isibheno ziiyure ezingama-24. Eli xesha linokunyuka liye kwiintsuku ezi-3 ukuya kwezi-4 ngokweenkcukacha zeakhawunti ethile enqunyanyisiweyo kunye nohlobo lwenkonzo olucelwe ngumthengisi.
Yintoni ongayenza ukubuyisela iAkhawunti yoMthengisi weAmazon?
Kukho iinkonzo ezahlukeneyo kunye neephakeji esizibonelelayo ukubuyisela iakhawunti yomthengisi weAmazon. Sinikezela ngokubonisana, ukungeniswa kweleta ye-amazon kunye neenkonzo zokulandelela; kuxhomekeke kudidi lwepakeji oyikhethileyo.
Ngaba sele usebenze kumatyala okumiswa koMthengisi weAmazon?
Ewe, sisebenze nenqwaba yamatyala ahlukeneyo ahambelana Ukurhoxiswa kweAkhawunti yeAmazon. Kwakhona, sineqela lamagqala omkhosi kule ndima.
Kuthekani ukuba iAmazon ifuna ulwazi oluthe kratya?
Sisingatha isibheno de sifikelele kwinjongo yaso- kukubuyiselwa. Emva kokukuhlawulisa kube kanye, sisebenza kwinyathelo ngalinye elincinci lenkqubo de yonke imicimbi isonjululwe.
Ngaba ukubuyiselwa kweakhawunti kuqinisekisiwe?
thina, njengeqabane, sinika olona hlalutyo lubalaseleyo kunye nesibheno sokubuyiselwa kweakhawunti yomthengisi ye-amazon emisiweyo. Asikwazi, nangona kunjalo, ukulawula izinto ezivela esiphelweni seAmazon kunye nokubuyiselwa kweakhawunti akuqinisekiswanga nge-100%. Nangona kunjalo, sigcine inqanaba lempumelelo elingaphezulu kwama-98% ukuza kuthi ga ngoku.
Ngaba sinika isiqinisekiso sokubuyiselwa imali?
Ngokuqinisekileyo asiyonwabisi imbuyekezo-yemali okwangoku kunokubakho iimeko zinoveli apho siyithathela khona. Ngolwazi oluthe kratya funda imigaqo-nkqubo yethu yokubuyiselwa imali.
Lithini inqanaba lokuphumelela kwakho ngokubhekisele kwiNkonzo yokuBhena yeAmazon?
Ngombulelo, kude kube ngoku sigcine inqanaba lempumelelo liphezulu okanye lilingana ne-98%. Besisenza okuhle kwaye sinama-90% ereyithi yokugcinwa kwabathengi ngenxa yokwoneliseka kwabathengi.
Ileta ebhenayo yeAplus yeAmazon
I-01: 11 13 Jun 21
Iakhawunti yam yomthengisi yeAmazon iyekisiwe, ke ndaye ndadibana neA Plus yeAmazon yeAmazon ukuze indincede ndibhale isicwangciso sokwenza isibheno.... Yenzelwe iakhawunti yam kwaye yajongana nemicimbi ethile endandikhe ndadibana nayo ngaphambi kokuyekisa ukusebenza Ngokubanzi, amava amnandi, ayephendula kwaye andihamba kwinkqubo yokufumana iakhawunti yam ivuselelwe. Ndisandula ukwenziwa ukuba ndisebenze kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo! Ke iinkonzo zabo ngokuqinisekileyo ziyasebenza!Funda ngokugqithisileyo
I-01: 00 13 Jun 21
Emva kokuza nesam isibheno, ndithumela i-4-5 POA kwaye akukho thamsanqa. Ndacinga ngokoqobo ngokwenza iakhawunti entsha yeAmazon kuba andifumananga akhawunti yam. Ingqondo, ndisenayo imali etshixiweyo... phezulu neAmazon kwaye bebengazukuphendula nakwesiphi na isicelo sam. . Ndithathe umngcipheko ndathi mhlawumbi ndiyabhatala kwaye ndibuyise iakhawunti yam kwaye ndiyasebenza kwaye ndibuyiselwe imali yam okanye ndiyawahlawula kwaye ndilahlekelwe yimali kwaye ndilahlekelwe yiakhawunti yam kunye nemali. inkampani yokundinceda ndibuyise iakhawunti yam. Bafaka i-POA ngokoqobo kwaye ngosuku olulandelayo ndafumana i-imeyile ethi "Iakhawunti yakho yeAmazon sele yenziwe yasebenza kwakhona" Umsebenzi owenziwe kakuhle kwaye ngokuqinisekileyo NDINKOMBELA i-Aplus Global! Ukuba ufuna ukuba iakhawunti yakho ibuyiselwe okanye iphinde yenziwe, musa ukwenza impazamo efanayo uyenzile. Fumana ingcali ukuze ikubhalele iPOA.Funda ngokugqithisileyo
Balungile kwinto abayenzayo. Ndizisebenzisile ukunceda ukuba iakhawunti yam yomthengisi yeAmazon iphinde isebenze, kwaye kwathatha ixesha, kodwa zange bayeke kwiakhawunti. Babhala izibheno kum de ndaye... yenziwe yasebenza kwakhona. Ukuphinda ndisebenze kwakhona kuthathe malunga neenyanga ezimbini ezinesiqingatha, kodwa ndinomhlobo osebenzise le nkonzo kwaye wayifumana iakhawunti yakhe kwiintsuku nje ezimbalwa. Ndincoma kakhulu!Funda ngokugqithisileyo
Ndonwabile kakhulu ukusebenza nabo. Inkonzo ekhawulezileyo kunye neleta yabo yokubhena iyamangalisa. Aba bantu bayayazi into efunwa yiAmazon. Enkosi!!
UMary Grace Landingin
Ndisebenze nale nkampani ngaphezulu kweakhawunti ezili-100 kwaye babuyisela uninzi lwazo. Zilungile kakhulu Ileta yeZibheno ezibonelelwa ngokufutshane. Ndiza kuqhubeka nokusebenza nabo.
Molo! Ndifuna ukukuxelela: Iakhawunti yam yenziwe yasebenza kwakhona! Ndiyabulela kakhulu ngoncedo lwakho! Ndiyakukhumbula.
19:24 17 kuMatshi 21
Eyona nto ibalulekileyo kwishishini. Emva kokuqesha inkonzo yabo kunye nokujonga abakwenzele iakhawunti yam. Ndimele nditsho ukuba ndiyakholelwa ukuba akukho nto abanako ukuyisombulula. Bacebise kuye nabani na oneengxaki... iakhawunti yomthengisi. Amanyathelo okukhawuleza kunye neziphumo ezikhawulezayo!Funda ngokugqithisileyo
23:34 09 kuMatshi 21
Ndingacebisa ukuba le nkampani ibhale naziphi na iileta zeZibheno zeAmazon njengoko besazi ukuba iAmazon ifuna ntoni. Ndenze uphando kwezinye iinkampani kwaye ndakhetha le kuba benze ixesha lokuthetha nam... malunga neakhawunti yam. Ngokwenyani bendicinga ukuba kuya kufuneka ndilinde i-90 + kunye neentsuku zokufumana ukukhutshwa kwemali kunye neakhawunti yam enqunyanyisiweyo. Enkosi APlusGlobal ngokubhala ileta yam yesibheno ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Ndicebisa ukuba kuqeshwe ingcali okokuqala xa ubhena ityala lakho. Le nkampani indincedile ukuba iphinde isebenze i-akhawunti yam kwangala mhla ndibhenela iakhawunti yam ngeleta yabo yokubhena. Eyenzelwe igama lam. Enkosi ngomsebenzi omkhulu!Funda ngokugqithisileyo
Abantu @ APlus Global Ecommerce zilungile ngokwenene kwaye ziluncedo. Ufumene ukukhangelwa kweakhawunti epheleleyo kwaye ufumane nokuqonda okukhulu kubo malunga notshintsho ekufuneka lwenziwe. Kwaye ucinga ukuba yintoni, yiyo... ndiphucule ukuthengisa kwamFunda ngokugqithisileyo
I-APlus Global Ecommerce ngumboneleli ngenkonzo omkhulu kwinkonzo yesibheno eAmazon. Ndibuyisele iakhawunti yam kwisithuba seeyure ezingama-72 zokuvalwa komsebenzi.
UMalak Abdullah Khan
I-APlus ye-Global Ecommerce ihanjiswe kwii-2 iiyure kwaye yabuyiselwa yiAmazon kwangoko. Eyona ilungileyo. Kufanelekile yonke ipenny. Ingcebiso yam kukuba ungajongi kwithegi yexabiso ukuba ufuna iziphumo Umsebenzi wakhe ulungile... ugqibelele. Emva kokuthenga unxibelelwano kuyakhawuleza, bendinalo uxwebhu ngaphakathi kweeyure ezi-2 kwaye iakhawunti ikhutshwe ngaphantsi kweeyure ezingama-24. Ndivale iakhawunti ngaphezulu kweenyanga ezi-5. Ndiyincoma kakhulu.Funda ngokugqithisileyo
18:21 16 Februwari 21
Ufumene iakhawunti yam ibuyiselwe kwisithuba esingaphantsi kweeyure ezingama-24, ndizakumcebisa nakubani na, ndiyeke ukuhlawula abantu kakhulu kwaye ndihambe ngeempondo zendlovu. Enkosi kakhulu